China KF900A Portable Intelligent IEC61850 IEDs Analyzer Muedzo vagadziri uye vatengesi | Kingsine
Nyanzvi muMagetsi Power Testing & Measurement
Dziviriro Relay Test Set
Nhoroondo ye KF9
KF900A Inotakurika Yakangwara IEC61850 IEDs Analyzer Muedzo
Yakakwana bvunzo chiridzwa inokura yakavakirwa pahungwaru substation kuyedza, kunyanya basa ndeyekudzivirira relay kuyedzwa, sampling kukosha kwekuongorora, SCD faira kuongorora / kuenzanisa uye MMS sevhisi. Inokodzera kutariswa uye kuyedzwa kwemidziyo yeIED yakadai seyakangwara substation kuchengetedza relay, kuyerwa uye kudzora mudziyo, batanidza unit uye nehungwaru terminal. Zvakare inogona kushandiswa muchiratidzo chekutarisa che substation control layer.
Full touch screen kushanda
Yakavakwa-mu-lithium bhatiri simba rekupa, ine saizi diki, huremu huremu, yakazara LCD touch screen kushanda, ine simba bvunzo mabasa, nezvimwewo, kuitira kuti isangane nezvinodiwa zvehurongwa hwekubatanidza bvunzo, kuisirwa uye kutumira, kushanda nekugadzirisa uye hunyanzvi kudzidziswa intelligent substation.
KF900A tsananguro nyowani yeoptical digital relay kuchengetedza tester, zvakare ichiunza chiitiko chitsva chekushandisa kune vashandisi.
Iyo diki diki yedhijitari relay tester, 10.4 inch yakakwirira-tsanangudzo capacitive LCD skrini, muchina wese wakazara touch screen kushanda;
Yese kuchengetedza relay bvunzo basa, Iine basa rakazara reManual test, state sequencer, Harmonic, recloser bvunzo, Line musiyano, Kureba, Mutation kure, Overcurrent, Zero sequencer, Ramping, Simba kutungamira, Differential rate, Differential Harmonic, Overexcitation kuchengetedzwa, Synchronize, Chengetedza magetsi ekupa bvunzo, Busbar musiyano, Frequency bvunzo, Dv / Df bvunzo, nezvimwe.
Iine MMS yekutaurirana sevhisi basa, Chaiyo-nguva yekutarisa sampling kukosha, mabhinari ekuisa / kubuda, yambiro chiitiko chekudzivirira relay uye kuyerwa & kutonga mudziyo. Tsigira kuchengetedza relay kuseta online kuverenga, shandura uye kuseta nzvimbo switch. Tsigiro yekudzosera ndiro inogonesa / kudzima, batidza / dzima.
Iine yechipiri virtual terminal yedunhu auto test basa, Nekutumira SV uye GOOSE meseji, uye kugamuchira MMS mhinduro iyo yakagadzira yakavharwa loop, ziva otomatiki bvunzo yematerminals;
Inotsigira kuenderana cheki yeIED mudziyo modhi mafaera. Tora iyo IED mudziyo modhi pamhepo kuburikidza neMMS, ienzanise neiyo yemuno SCD modhi faira, uye tora kuenderana mhedzisiro yemodhi;
Iine kumashure uye substation control layer bvunzo basa, nekupinza SCD faira, inogona kutevedzera kudzivirira, kuyerwa & kudzora mudziyo kutumira kure chiyero chiratidzo, kure kure kudzora chiratidzo uye mamwe masaini, pinda iyo chiteshi chekudzora layer network kuburikidza neMMS protocol, kutaurirana nekumashure. uye mudziyo uri kure, wakanakira uye unokurumidza kukonzeresa zviitiko zvese zvealarm, inoshandura shanduko ON kana KUDZIMWA, uye ikozvino, voltage, uye masimba emagetsi kuti uwane bvunzo-ku-point neyekutarisa kumashure kana master station;
Tsigiro yekutumira substation Excel point tafura, tora chiteshi mepu yekumisikidza kweyekure chiyero chiratidzo uye kure kure chiratidzo chekudzora kuburikidza neSCD faira, inoburitsa otomatiki chiteshi chiratidzo chetafura, uye yakananga kuendesa kure chiyero chiratidzo uye kure kure chiratidzo chekudzora zvinoenderana nenhamba yekuraira;
NeSV, GOOSE meseji yekutarisa basa. Chaiyo-nguva kuratidzwa kweSV sampuli kukosha amplitude, chikamu, frequency, waveform, vector uye meseji sosi kodhi, chaiyo-nguva inoratidzira GOOSE virtual terminal mamiriro uye meseji source code, rekodha yega yega yega terminal inotendeuka nekufamba kwenguva uye kuyedza GOOSE meseji kutumira meseji;
Inotsigira kutapurirana kunonoka, SV meseji kutendeseka, SV kubuda chaiko, kusanganisa unit dispersion yenguva uye kurongeka kweyero yenguva;
Inotsigira graphical kuratidzwa kwemafaira eSCD, graphically inoratidza IED mudziyo wekubatanidza uye zvinongedzo zveanonyatso terminal zvishwe; ine SCD faira rekuenzanisa basa, uye inogadzira mishumo yekuenzanisa;
Real-time meseji inogamuchira kana ichienzaniswa neiyo SCD faira kuti uwane kuenderana cheki yefaira reSCD;
Tsigiro rekodhi uye PCAP faira off-line ongorora basa, ine PCAP meseji yekutamba basa.
Tsigira IRIG-B kutumira basa, inogona kushandiswa senguva sosi, ine 6 chiteshi chakaparadzana fiber IRIG-B chiratidzo.
Tsigira Polarity yekutarisa basa, tsigiro shandisa DC nzira yekutarisa polarity yekudzivirira / metering musimboti we electromagnetic yazvino transformer uye yemagetsi ikozvino transformer;
Ne optical power measurement function, off-site phase monitoring function, yakavakwa mu lithium battery power supply, nguva yekushanda inopfuura maawa 8 nguva dzose.
Fiber Port 8 pairi, LC mhando chiteshi, wave-kureba 1310nmImwe yemaoptical ports ndeye yakatsaurirwa 1000M optical module, iyo inokodzera 1000M network.
Fiber serial port 8, ST type port, wave-length 850nm6 kutumira, 2 kugamuchira (Inogona kushandiswa seFT3 kana IRIG-B)
GPS Port 1 chiteshi, GPS chiratidzo inogamuchira yemukati
Chiteshi chekupinza analogi(Sarudzo) 4 kana 8 pairs, 18 bit AD, 40kHz sampling rate, yekuisa renji 0-250VAC
Zvakaoma kubata binary kupinza 1 Pair, Adaptive isina kubatana kana inogona kubata (30 ~ 250V), nguva yekupindura ≤500μs
Zvakaoma kubata binary kubuda 1 peya, Vhura-kuunganidza mhando, inovharira simba kupfuura 250V, 0.3A (DC), nguva yekupindura ≤ 100μs
Edza kururama Voltage uye yazvino kuyerwa kwekukanganisa kukanganisa ≤0.05%Frequency kurongeka kuri nani pane 0.001Hz muhuwandu hwe15 ~ 1000HzKukanganisa kuyerwa kwechikamu ≤0.01°
kutumira Kwakarurama voltage uye ikozvino kuyerwa kwekuyera kukanganisa ≤0.05%Frequency kurongeka kuri nani pane 0.001Hz muhuwandu hwe10 ~ 1000HzPhase yekubuda kwechokwadi kukanganisa ≤0.01 °
SV meseji inobuda kuparadzira ≤±80ns
Kunonoka kweFiber serial port kunonoka ≤100ns
SV yakabuda inoyananisa Kukanganisa kwenguva pakati peFiber port <1μs
Magetsi Yemukati yakakura simba lithium bhatiri packPower Adapter: Input 220VAC/50Hz, -20%~+20%Kubuda DC 15V±10%
Display 10.4 inch high-definition capacitive LCD skrini (yekubata sikirini)
Zvakapfuura: K2063i Universal Relay Test Set
Zvinotevera: KF86 Intelligent Relay Test Set
Frequency Dziviriro Relay Tester
Dziviriro Relay Tester
13 Zviteshi (6x35A & 7x310V) zvinobuda K3166...
Compact 6-chikamu 6x300V voltage kubuda KF85 Univ...
Relay Test Set Mutengesi, Intelligent Relay Tester, Universal Relay Test Unit, Distance Protection Relay Tester, Digital Relay Test, Frequency Relay Test Kit, Zvese Zvigadzirwa